2010/2012/2015 Election » တူ Whom It မေ Concern	10
မြစပဲရိုး says: RFA Burmese TV Channel uploadedanew video: MDY Voters.
မြစပဲရိုး says: တူ Whom It မေ Concern (2)
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၁ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏ မြို့ဦးစေတီဘေးက ဘော်လုံးကွင်းမှာ အမေစုဟောပြောပွဲ လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုမိန့်ရတယ်တဲ့ ….
Mike says: ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှု NLD ကတရားဝင် ထောက်ပြပြီ။
kai says: နိုင်မှာပါ….
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေပဲ ပါတီအလုပ်ကို လုပ်တယ်
အဲ့ဒီလို လုပ်တဲ့အတွက် အထင်လွဲသူတွေလွဲကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ သဘောကျတယ်။ အပြတ်အသတ်မနိုင်ရင် အဆင်ပြေဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒီတော့ တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အစစအရာပြင်ဆင်ထားနိုင်မှ အဆင်ပြေမှာ။ ဒီအတွက် နားမလည်သူတွေ အပြစ်ပြောချင်ပြောပါစေ ကျုပ်ကတော့ ထောက်ခံတယ်။ ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ ဒီလို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ထားမှုကို ထောက်ခံမှာမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ဦးတည်တဲ့ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေ သူတို့လက်ညှိုးထိုးစရာတစ်ကွက်မှမရှိဖို့အတွက် ဒီလို လုပ်ရပ်ကို ဒီအချိန်မှာ ထောက်ခံတယ်။ ရိုးရိုးသားသား နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကို မြင်သာအောင်လို့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ချပြထားတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု မပြနိုင်ရင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတောင် ဖြစ်ခွင့်မရှိအောင် စီစဉ်ထားတယ်
မြစပဲရိုး says: အခု NLD တံဆိပ် နဲ့ လူတစ်ချို့က တစ်ဖက် ကို ဓားနဲ့ ပြန်ခုတ်ဖို့ ကြိမ်းဝါးနေတယ် လို့ သတိပေးစာ တွေ မြင်နေရတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ငိုးမအဆိုးဓမြ သတ္တိရှိ ငါ့လာဖန်းဗါလား.. ခုဒေါ့ ဗါမှ မလှုပ်နိုင်တဲ့ ဒီချုပ်ကို အနိုင်ကျင့်သယ်.. ရီးဘဲ။
မြစပဲရိုး says: နီ ကို ဖန်း ရအောင် နီက လူ မို့လို့ လားဟဲ့။
Alinsett @ Maung Thura says: နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က သုဝဏ္ဏ မြို့ဦးစေတီ ကွင်းအတွင်း….အမေစု ပြောသမျှ စကားထဲမှာ…